Talooyin iyo tabaha ku saabsan sida lacag loo keydiyo marka la ballansanaayo Doomaha | Maraakiibta Absolut
Talooyin iyo tabaha ku saabsan sida loo keydiyo lacag marka aad ballansaneyso safar
Ana Lopez | | General
Dad aad iyo aad u badan ayaa ku safraya safar dalxiis, oo waliba ku celceliya, marka loo eego tirakoobka in ka badan 50% kuwa isku dayay inay soo noqdaan. Waxaan hubnaa in mid ka mid ah waxyaabaha kugu dhiirrigeliya inaad ku celceliso, marka lagu daro raaxada doonyaha naftooda iyo meesha loo socdo, inay yihiin qiimayaasha, taasina waa haddii aad taqaanid sida loo sameeyo waxaad heli kartaa gorgortan dhab ah oo aad lacag kaydsato markaad samaysanayso boos celintaada.
Waxaan ku siinaynaa xoogaa tilmaamo ah si aad u ogaato daqiiqadda ugu habboon qiimaha ugu fiican, laakiin taxaddar! In tani aysan ahayn mid aan khaldami karin.
1 Laba safar hal-safar (2 × 1)
2 Lix bilood ka hor si aad u samaysato
3 Ma jiraan wax dalabyo ah oo daqiiqaddii u dambaysay ah?
4 Ka faa'iidayso ololaha shirkadaha maraakiibta
Laba safar hal-safar (2 × 1)
Taas waad arki doontaa shirkado badan ayaa bixiya 2 × 1 safaradooda, waxa kaliya ee xun ee ku saabsan dalabka noocan ah waa taas waxaad ku xaddidan tahay qaddar. Tusaale ahaan, waxay u badan yihiin laba mid mid jasiiradaha Giriigga ama Mediterranean -ka. Haddii aadan aqoon aagga, ama aad la yaabtay oo aadan wax dhibaato ah kala kulmin xulashada taariikhda, waxaan kuu xaqiijinayaa in tani ay tahay ikhtiyaar wanaagsan oo lagu safro qiimaha badhkiis oo aad leedahay dhammaan faa'iidooyinka haddii aad bixin lahayd tigidh. Haa runtii, labada-hal-qof ayaa badanaa loola jeedaa tigidhka, waa inaad bixisaa talooyinka laba qof iyo khidmadaha raacitaanka mid kasta, laakiin waxaad ku safraysaa dhexda ... maxaad kaloo rabtaa!
Lix bilood ka hor si aad u samaysato
Haddii aad ku caddahay taariikhaha safarkaaga, iyo meesha aad u socotid, iyo waliba taasi waxay dhacdaa ugu yaraan lix bilood ka hor, waa waqtigii ugu habboonaa ee laga gorgortami lahaa qiimayaasha. Waa xariiqa aad ka heli doonto soo jeedinta ugu fiican, wax badan maahan sababta oo ah qiimaha, oo xitaa laga yaabo in la dammaanad qaado, laakiin sababta oo ah waxaad dooran kartaa kaabayaasha ugu fiican.
Waa maxay macnaha qiimaha dammaanadda leh? Tani waa xeelad ay adeegsadaan qaar ka mid ah shirkadaha maraakiibta taas oo ay kuugu xaqiijinayaan haddii aad hesho isla doonidaas, qiimo jaban oo leh shuruudo isku mid ah, inay ku siin doonaan isla qiimahaas.
El Sicir -dhimis dhexdhexaad ah oo aad haysato si aad u ballansato ugu yaraan 6 bilood kahor inta badan waa qiyaastii 50%, iyo mararka qaarkood waxay gaadhaa 70% waxayna u malaynaysaa inaad si ficil ah u ballansan karto 50 euro. Mararka qaarkood kaydkaasi wuxuu mudan yahay inuu halis galo.
Dabcan Boos celintani waxay aad ugu dhowdahay haddii aad u safraysid qoys ahaan Ama waxaad rabtaa qol qoys, maadaama (ugu badan) ay tahay in kaliya 25% awoodda markabka loogu talagalay qolalka qoyska.
Ma jiraan wax dalabyo ah oo daqiiqaddii u dambaysay ah?
Oo hadda waxaan tagnaa dhinaca ka soo horjeedda iyo dalabyada daqiiqadda ugu dambeysa, midda aad timaadid wakaaladda oo aad ku tidhaahdo saddex maalmood gudahood waxaan rabaa inaan raaco, oo sameeyo iyadoo lacag la keydiyey. In yar baa nasiib u leh taas, laakiin waxaad noqon kartaa mid ama mid ka mid ah. Waxaan ku siin qayb ka mid ah macluumaadka, 80% dalabyada daqiiqadii ugu dambeysay waxaa loogu talagalay lamaanayaasha waxaana lagu wargeliyaa wax ka yar 7 maalmood kahorLabaduba waa inaad noqotaan kuwo aad u dabacsan marka la marayo jidka.
Ka faa'iidayso ololaha shirkadaha maraakiibta
Ku dhawaad ​​dhammaan shirkadaha maraakiibta ayaa leh xilliyada dhimista iyo dallacsiinta iyadoo ku xiran waqtiga sannadka badbaadi lacag. Intaa waxaa dheer, xayeysiisyadani waxay kuugu yimaadaan emailkaaga dadka haysta kaarka ama codsiyada daacadnimada. Haddii aad caddaynayso inaad jeceshahay inaad la safarto shirkaddaas maraakiibta sababta oo ah adeegga ay ku siiso, tani waa fursadda ugu fiican ee lagu heli karo qiimayaal wanaagsan.
Shirkadaha maraakiibta ayaa iyaguna qaada dallacsiinta ee nooca "cabitaannada bilaashka ah", waxay ku daraan Wi-Fi qiimaha, waxay ku siinayaan daaweyn isboorti, ama xitaa waad aadi kartaa makhaayadaha sida caadiga ah ku jira menu oo leh menu dhadhan leh oo ku jira tigidhka.
Marka laga reebo tan, kuwaas oo ah ololaha shirkadaha maraakiibta ayaa ah ololaha wakaaladda, kuwa leh xafiis iyo kuwa ka shaqeeya intarneedka labadaba.
Waxaana cad inay jirto kooxaha qaarkood, sida dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee leh faa'iidooyinkooda. Halkan Waxaad haysataa tusaale cad oo ah noocyada safarada sida caadiga ah la siiyo waayeelladan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Maraakiibta Absolut » General » Talooyin iyo tabaha ku saabsan sida loo keydiyo lacag marka aad ballansaneyso safar
Dhar noocee ah ayaan ku qaadan karaa markab? Miyaan wax walba ku ridayaa shandada?